SALIIDA MADOW IYO SALIIDA MADOW EE MADOW: QALABKA WAXTARKA LEH IYO KA HORJEEDA - DAAWADA DADWEYNAHA
Maxay faa'iido u tahay ninkii madow ee madow, isticmaalka shumaca iyo saliida ee daawada dhaqameed
Khudaarta basbaaska leh waxay ku jiraan ester iyo walxo kale oo karsan. Waxaan kuu soo jeedin karnaa madow. Mugdi madow - waa dallad diineed oo labadii sanno ah, sifooyinka faa'iidada leh waa kuwo aan dhammaad lahayn, inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ka horjoogsadeen in ay isticmaalaan. Qalabka daawada ee qamriga madow waxaa loo yaqaan tan iyo wakhtiyadii hore.
Ma taqaanaa? Cumin madow waxay leedahay magacyo badan - kalondzhi, nipper, kareemaha roman.
Cilmi-baadhayaashu waxay qabteen tiro daraasado ah waxayna caddeeyeen in abuurka miraha ay ku jiraan waxyaabo badan oo waxtar u leh jidhka bini'aadamka:
Fitamiin B (B1, B2, B6, B9);
micro-iyo macronutrients, sida kalsiyum, potassium, fosfooraska, magnesium, zinc, birta, copper, selenium;
fitamiinnada kooxaha E, C, K.
Sababtoo ah joogitaanka maaddooyinka waxtar leh ee macdanta madow waxay heshay codsiyo meelo badan oo nolosha nolosha ah.
Waa muhiim! Boqolaal garaam oo miro ah ayaa ku jira 44.2 garaam oo karbohidraat, 22.2 garaam oo baruur, 17.8 garaam oo borotiin ah, iyo qiyaastii 10.5 garaam oo fiber iyo glucose ah. Intaa waxaa dheer, halabuurka qasacadku waa qadar yar oo biyo ah.
Qodobbada waxtarka leh ee madow
Qodobbada faa'iidada leh ee macdanta loo isticmaalo xitaa dhakhaatiirta Masar hore. Xitaa maanta, inta lagu jiro dhoofinta, weelasha saliid kalondzhi ayaa laga helaa. Xumada madow waxay faa'iido u leedahay dadka oo keliya, laakiin sidoo kale carruurta. Qodobka madow ee madoow ayaa la kariyaa ilmaha yar waxayna keenaan faleebo marka colicku u muuqdo caloosha. Sidoo kale, cumo ayaa caanaha ka caawisa in ay timaaddo xilliga nuujinta ee haweenka.
Qaybta aadka u badan ee sifooyinka faa'iidada leh ee madow madow waxay ku jirtaa hadiyadeeda si kor loogu qaado difaaca aadanaha. Sababtoo ah macaamiisheeda oo leh qiyaaso faa'iido leh, nipper waxay hagaajinaysaa shaqeynta habka dheef-shiidka waxayna ka caawisaa xanuunka neefsashada. Cumada madow ayaa si ballaaran loo isticmaalay bogsashada hadda. Isticmaal chernushka si madaxbannaan loogu soo iibinta tinctures, decoctions iyo saliidaha, iyo sidoo kale in lagu daro geedo kale.
Ma taqaanaa? Nabi Muxammed ayaa sheegay in xajinta madow ay daaweyn karto dhammaan cudurada marka laga reebo dhimashada. Ma jiro hadal wanaagsan oo si buuxda u tilmaamaya sifooyinka bogsashada ee sharoobada.
Isticmaalka duufaan madow ee daawada dhaqanka
Daawo dhaqameed ayaa si ballaaran loo isticmaalaa madow. Daaweeyayaashu waxay tixgelinayaan xannibaad dhammaan cudurada. Laakiin ha iloobin in miraha geedaha caraway ay ku darsadaan sifooyinka faa'iido ee khilaafka in ay isticmaalaan. Dhakhaatiirta dadku waxay isticmaalaan kalondzhi si ay u sameeyaan maraqyada iyo shaaha kuwaas oo leh saameyn ku bogsiinaya jirka aadanaha.
Qabow iyo hargab
Badanaa waxaa la og yahay in la isticmaalo midhaha cumin ee hargabka iyo hargabka. Guryaheeda daaweyntu waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta dheecaanka candhuufta marka ay qufacayso ayna u kaydiso hargabka.
Marka qufacayo. Miisaanka oo ah abuurka ayaa lagu shubay 500 ml oo biyo ah karkarana lagu dhejiyo barkadda biyaha 10 daqiiqo, sifeeyaa. Cab 20 daqiiqo cuntada ka hor, 100 ml 3 jeer maalintii.
Qabow. Baro neefsiga leh midhaha cumin. Waxaynu diyaarineynaa neefsiga: waxaan burburinnaa abuurka, iyaga ku rid digsi, ku shub biyo karkaraya kuna dabool dabool. Isku day inaad soo dhajiso 10 daqiiqo, ka dibna dabool daboolka, dabool madaxa madaxa ilmagaleenka kuna neefso 15 daqiiqo.
Isticmaal jeex madow ah madax xanuun
Haddii ay dhacdo madax xanuun, waxaad sidoo kale ku dabbaqi kartaa bogsiinta duufka madow. Saamaynta ah in laga takhaluso madax-xanuun iyo miyir-beelka ayaa sabab u ah isdhexgalka madow ee madadaalo leh nidaamyada dhowr jirka:
qawaaniinta habka hoormoonka
kicinta xididdada dhiigga
burburinta uric acid.
Taas awgeed waxaan ubaahan nahay abuurka cagaarshow, xiirto iyo madow madow. Qaadi abuurka ee wadaag siman leh Booqdaha kafeega ah iyo isticmaal budada keentay hal shaaha ka hor cunto ka hor.
Waa muhiim! Cab cabirku waa mamnuuc.
Waxaad sidoo kale xoqin kartaa meel ku wareegsan saliida saliida ee macbadka, waxay ka caawisaa hagaajinta dhiigga iyo sumoobidda.
Sidee dhirta looga caawiyaa cudurada ENT?
Si aad uga takhalustid hargabka waxaad u baahan tahay inaad saliidiso marinnada sanka gudahooda gudaha iyo dibedda. Marka uu rhinitis ku jiro sanka oo suufka suufka lagu qasi karo saliid 15 daqiiqo.
Iyada oo lagu xiro xabeeb iyo hinraagid, saliidda rubuc ka mid ah shaaha ayaa la qabadsiiyaa ama la dhaqdhaqaaqa. Waxay ka dhigaan neefsashada dhuun xanuunka iyo saliida madow ee madow.
Sida cumo loo isticmaalo cudurrada indhaha
Xaaladaha badankood, cudurrada indhaha waxaa ka muuqda caabuqa indhaha, gubida dareenka, iyo culeyska. Sababtu waa infekshan.
Daaweyn, tixgelin hababka ugu caamsan:
saliid saarid shidaal habeenkii ee irid iyo indhaha. Cabitaankan oo kale ah 7 dhibcood oo saliida leh shaaha kulul. Dhibaatadani waxay kaa caawineysaa yareynta indhaha.
Codso ilaa 10 daqiiqo. Isbaanyo kulul: hal qaado oo miro ah ayaa lagu soo dhejiyay 250 ml oo biyo ah waxaana la bakhtiiyey ilaa nus saac.
waxay ku aasayaan saliida indhaha (hal dhibic kasta) subaxda iyo fiidkii, iyo sidoo kale cabbitaanka qaado oo sabdo ah, adoo maraaya malab.
Ma taqaanaa? Kansarka Kansarka Immuno-Biological Laboratory ee Koonfurta California ayaa xaqiijisay in cunto cunista madow ay ka caawiso jirku inuu soo saaro dhuuxa lafdhaqaaqa waxayna adkeeysa kansarka inuu koro.
Sidee loo adeegsadaa sifooyinka faa'iidada leh ee qurxinta maasaarrada madow
Waagii hore, dumarka caddaaladda ah ayaa isticmaalay saliida madow ee madow sida wakiil dibudhisid ah. Waxaa laga helay isaga oo isticmaalaya kondomoolka hadda. Cumada madow waxay heshay isticmaalka baahsan sababtoo ah fiitamiino, macdan iyo asiidh aan habooneyn oo ka samaysan oo ay yeeshaan saamayn bogsiin ah oo ka mid ah maqaarka iyo timaha.
Saliid caraway ah ayaa loo isticmaalaa dibadda. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay labadaba daawooyinka iyo daawooyinka kale:
saliidku wuxuu ciribtiraa oo ka daariyaa laalabka;
waxay kor u qaadeysaa maqaarka maqaarka waxayna kordhisaa ulasteeda;
waxay gacan ka geysataa joojinta calaamadaha dhalmada ka dib;
tones oo ka nadiifiyaa maqaarka ka yimaadda wasaqoobida, waxay nuujisaa gargaarkooda;
Sababtoo ah awoodda lagu xasilinayo geeddi-socodka dhiigga iyo wareegga dhiigga, saliiddu waxay ka takhalustaa barar waxayna ka hortagtaa samaynta cellulite.
Iyadoo la tixgelinayo sifooyinka kor ku xusan, saliidda madow ee madow waxaa loo isticmaalaa qeybta ugu weyn ee soo saarida waxyaabaha daryeelka maqaarka ee noocyada maqaarka oo dhib leh, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa sida qayb ka mid ah qeybaha miisaska timaha.
Waa muhiim! Inta badan alaabada la isku qurxiyo ee loo isticmaalo miisaanka anti-cellulite waxaa ku jira saliida madow ee madow.
Isticmaalka dhumucda ilkaha
Saliidda madow ee madow waxaa ku jira maaddooyin badan oo leh antiseptic, anti-bararka, saameynta suuxinta. Sababtoo ah joogitaanka abuurka ee saliidaha lagama maarmaanka ah, waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo xargaha iyo dhaqidda afka. Saliidda madow ee madow ayaa soo cusbooneysiiyay oo tayo wanaagsan leh, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo gingivitis, stomatitis, fuuqbax.
Si loo baabi'iyo xanuunka ilkaha, saliida waxaa laga dalbadaa dhibco yaryar ama la afuufiyo afka.
Isticmaalka duufaanka madow ee miisaanka lumay
Maadada madow waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo miisaanka. Guryaha bogsashada waxay leeyihiin miraha iyo saliidda labadaba. Tixgeli hababka caadiga ah ee miisaanka luminta iyadoo la adeegsanayo macdanta madow.
Waan ku qaadnaa gudaha. Qodobka qumanka ayaa calalciya calool madhan ama cabbitaan saliif ah ka dib cuntada. Si aad u lumiso, waxaad isticmaali kartaa maraq ee chernushki. Labo shaaha oo ah miraha waxaa lagu shubay 500 ml biyo karkaraya, ku rid 10 daqiiqo barkadda biyaha, sifeeyaa. Qaado decoction gudaha 100 ml saddex jeer maalintii hal saac ka hor cuntada. Cumin waxay hagaajinaysaa dheefshiidka, dejiya nidaamyada dheef-shiid kiimikaadka, taas oo niyadjabeysa miisaanka.
Isticmaalka banaanka. Miisaaniyadda, kookeriil ee caraway, saliidda casaan iyo saliidda dufan ayaa la diyaarinayaa. Iska ilaali saliidda xayawaanka oo ku dabool farsamooyin yaryar oo ka soo baxa qoobabka ilaa dhexda. Masajirku wuxuu sameeyaa qiyaastii 7 daqiiqo meel kasta oo dhibaato ah, illaa inta isku dar ah la nuugo. Waxay sameeyaan macaamil xilliga hurdada si aysan jirku u noqonin "supercooled". Intaa waxaa dheer, saliida madow ee madow waxay awoodaa in ay adkeeyaan maqaarka markaad harqaan.
Contraindications in isticmaalka madow madow
Dadku waxay aaminsanyihiin in qamrigu leeyahay hanti dawo oo keliya, laakiin sidoo kale waxaa jira khilaafka loo isticmaalo. Saliida iyo miraha qoraaga roman Laguma talin karo inaad isticmaasho dhowr xanuun, sida sonkorowga, xanuunka qanjirada, cudurada wadnaha, dhiig-baxa. Waa mamnuuc inaad isticmaasho duufka madow ee haweenka uurka leh, sababtoo ah waxay sababtaa qanjirka shubanka, iyo dadka qaarka xubin xubin ka ah. Sababtoo ah kordhinta difaaca jirka, diidmo ku-beddelashada ayaa dhici karta.